Ekoatora: Mamoaka Toro-làlana Maimaim-poana Ho Anà Rindrambaikon’Onjam-peo Ny Radialistas · Global Voices teny Malagasy
Ekoatora: Mamoaka Toro-làlana Maimaim-poana Ho Anà Rindrambaikon'Onjam-peo Ny Radialistas
MpanoratraGabriela Garcia Calderon
Voadika ny 28 Oktobra 2013 3:29 GMT
Fanamarihan'ny Rising Voices: Ampahany aminà vondron-dahatsoratra manazava ny tetikasan'ireo mpandray anjara avy amin'ny fampivondronana “Conectándonos” nokarakarain'ny RV tany Bôlivia, Peroa, ary Ekoatora tamin'ny 2011-2013 ity lahatsoratra ity. Ny tanjona tamin'ireo atrikasa ireo dia ny hanampy hampivoatra ireo mpitarika vaovao anatin'ireo vondrom-piarahamonina vitsy mpisolo tena ao anaty aterineto, ary hanamafy ireo tambajotra sy fifanakalozana eo amin'ny tanora mampiasa ny media dizitaly ho an'ny fiovàna ara-piarahamonina.
Ny Radioteca, mpampiantrano rakipeo maimaim-poana sy malalaka, dia nanokatra ny varavarany, enin-taona lasa izay, mba hahafahan'ny tsirairay, isan'izany ireo tobin'onjam-peo ao an-toerana, ireo mpanao “podcast” vao misondrotra, sy ireo fikambanan'ny vondrom-piarahamonina mampiakatra ny votoatiny maimaim-poana. Tantanan'ny fikambanana Ekoatoriana mipetraka any Quito, Radialistas [es] – ny Apasionadas y Apasionados ary ny Código Sur [es] io vohikala io.
Araka ny voalaza tanatinà lahatsoratra iray teo aloha ao amin'ny Rising Voices:
Hatreto, manodidina ny 6.300 ireo mpampiasa voarakitra, izay efa nampiakatra rakipeo maherin'y 20.000 tao anatin'io sehatra io. Ao anatin'ilay vohikala, afaka mijery votoaty voalamina araka ny sokajiny avy tahaka ny zon'olombelona, ny miralenta sy ny fananahana, ny fahasalamana, ary ny kolontsaina, anivon'ireo hafa, ny tsirairay.
Vao haingana izay izy ireo no namoaka ao anaty aterineto vondronà toro-làlana momba ireo fotokevitra samihafa, anatin'izay ny famokarana onjam-peo, ny fanohanana ara-teknika sy ireo loharano maimaim-poana, ho fanampiana ireo mpanao gazety, mpamokatra onjam-peo, olon-tsotra manao gazety, sy ny tsirairay izay liana amin'ny onjam-peo sy ny rindrambaiko misokatra, hanapariahana vaovao mikasika ny vondrom-piarahamonin'izy ireo.
Misy fampianarana anaty aterineto momba ny onjam-peo sy ny rindrambaiko malalaka [es], miaraka amin'ireo fitaovana azo sintonina momba ireo rafitra fitrandrahana, ireo mpamoaka rakipeo, ireo teknolojia azo alaina maimaim-poana hamokarana onjam-peo ao anaty aterineto, ary lisitr'ireo feon-kira sy feo fanaingoana nahazoana alalana avy amin'ny Creative Commons. Na koa, afaka misintona ilay torolàlana manontolo avy amin'ny failo pdf ireo mpampiasa.
Manome sehatra fampiantranoana votoatim-peo maimaim-poana ihany koa ny Radialistas, izay midika fa afaka mitahiry ireo failony rehetra ao amin'ny vohikalan'ny Radialistas ny mpampiasa tsirairay. Avy eo ireo failo ireo dia azon'ny rehetra ampiasaina, sintonina ary haparitaka – raha toa ka asiana ny anaran'ny namoaka azy ilay fampahalalana.
Misy toerana ho an'ny tsikera ihany koa ahafahan'ireo mpampiasa mandray valinteny avy amin'ny hafa sy avy amin'ireo mpandrindra ny vohikala, ary mizara hevitra momba ny traikefany.
Nanam-bitana izahay ka afaka nitafa momba io tetikasa io tamin'i Clara Robayo, mpitantana ny vondrom-piarahamonin'ny Radialistas.
Ahoana sy nahoana no nisian'ity tetikasa ity?
Nanomboka io tetikasa io roa amby folo taona lasa izay. Tsy [nanana fahafahana] namokatra ireo tobin'onjam-peo ary nila fitaovana izahay. Koa, tamin'ny voalohany dia navoaka ireo lahatsoratra, satria tsy nisy loharano nahafahana nanao fitahirizana am-peo. Tamin'ny 2004 no nisy ireo rakipeo voalohany navoaka.
Ny rakitr'ireo mpiditra voalohany dia nanana tobin'onjam-peo 200, ary ankehitriny dia manana maherin'ny 21.000 izahay.
Inona no traikefanao manokana, ary inona ny antony nahatonga anao hiditra anatin'io tetikasa io?
Nanomboka niasa tao aho roa taona lasa izay. Nahafantatra ny Radialistas aho satria nanana fandaharana tamin'ny onjam-peo izy ary naely tao ireo rakipeo. Nalaza be izany. Nanomboka niaraka tamin'ny boky nataoko teny amin'ny anjerimanontolo mikasika ny fitenin'ny onjam-peo eo amin'ny Aterineto aho, izay nanadihady ireo rakipeo tao amin'ny Radialistas. Kelikely teny dia lasa tafiditra kokoa tamin'ny fizotrany aho ary farany dia lasa niasa tao mihitsy.
Ankoatra ny fandaharana nataoko tao amin'ny onjam-peo, dia niasa tany amin'ny onjam-peon'ny anjerimanontolo nisy ahy aho sy tanatinà onjam-peo tao amin'ny Aterineto. Niezaka nanazava ireo fandaharan'onjam-peo sy tantara hatrany aho, satria mihavery andro aman'alina izy ireo.
Iza no tena mpampiasa ny Radialistas?
Ireo onjam-peon'ny vondrom-piarahamonina, ireo mpanao gazety ary ireo vahoaka amin'ny ankapobeny liana amin'ireo fotokevitra atolotray no tena mampiasa azy. 6.000 isanandro ireo rakipeo misy misintona. Gaga amin'ny fomba fampiasan'ny olona io fitaovana io izahay, satria tsy ireo tobin'onjam-peo irery ihany no mampiasa azy ireo. Maharay hafatra avy any Frantsa, Etazonia, eny fa na avy any i Shina aza, izahay, izay hitantaran'ny mpampiasa aminay ny fampiasan'izy ireo ilay fitaovana mba hianarana teny Espaniola. Ao ihany koa ireo hafa miteny aminay fa ampiasain'izy ireo amin'ny fivoriana sy ny lahateny izany. Ireo mpampianatra mpikaroka sasany dia mampiasa izany anatin'ny lesony. Ary ny hafa amin'ny tantara tsangana.
Misy tantara manokana tianao zaraina ve nandritra ny fotoana niarahanao tamin'ny Radialistas?
Misy olona sasany mitsidika ny fanomezana toro-hevitra momba ny firaisana ara-nofo [ao amin'ny Radialistas]. Mihevitra mihitsy aza izy ireo fa tena misy i dokotera Miralles [endrika noforonina]. Nahazo hafatra maro izahay hilazan'ny olona fa te-hihaona aminy izy ireo, na mangataka fihaonana aminy.
Tanatin'ny fandaharan'onjam-peo nataoko, misy mpihaino sasany niantso ahy ary nangataka ny hiresaka aminy amin'ny alalan'ny antso an-tariby anay. Reraka aho milaza amin'ny olona fa tsy tena misy i dokotera Miralles, alohan'ny nanapahako hevitra hilalao kely ka hiteny amin'izy ireo fotsiny fa efa lasa izy.
Afaka mifandray sy manaraka ny Radialistas ao amin'ny Facebook sy Twitter @radialistasnet ianao.